Gudiga Gurmadka ee Putland oo soo gaaray Muqdisho”Sawirro” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Gudiga Gurmadka ee Putland oo soo gaaray Muqdisho”Sawirro”
Gudiga Gurmadka ee Putland oo soo gaaray Muqdisho”Sawirro”
Muqdisho(SONNA)-Gudiga gurmadka Qaran ee Putland ayaa maanta soo gaaray Magaaladda Muqdisho kuwaas oo wada lacago ay iska soo aruuriyeen shacabka iyo maamulka Putland si-ay uga qeyb qaataan Gurmadka loo sameynayo Dadkii dhibaatada ka soo gaartay Qaraxii ka dhacay Magaaladda Muqdisho 14 kii October.
Goroonka Diyaaraha Muqdisho ayaa waxaa gudigan ku soo dhaweeyey Wasiiro, Xildhibaano ka tirsan Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya, Xubno ka socday Gudiga Gurmadka Deg Deg ah.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka ee Xukuumadda Soomaaliya Cilmi Cumar Ceynsane ayaa sheegay in loobahan in Soomaalidu isgarab istaagto ayna ugu mahadcelinayaan sida ay ay ugu soo gurmadeen walaalahooda dhibtu gaartay.
Deeqdaan Lacageed oo ay iska soo aruuriyaan shacabka iyo maamulka putland ayaa gaareysay 480,000 kun oo Dallar taasi oo loogu tala galay in loogu gargaaray dadkii ay wax yeelada ka soo gaartay musiibadii ka dhacay Isgooska Zoobe ee magaalada Muqdisho.
Previous articleDowladda Federaalka Soomaaliya, Danjireyaasha dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya iyo AMISOM oo ka wada hadlay qorshaha abaabulka dagaalka Alshabaab
Next articleWasaaradda Warfaafinta Soomaaliya, kuwa Dowlad goboleedyada iyo Warbaahinta Madaxa banaan oo caawa kala saxiixanaya hishiisyo dhanka Wacyi gelinta ah